Mety amin'ny bisikileta ve ny Goretex? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Palitao bisikileta Gore tex - mamaly ireo fanontaniana
Palitao bisikileta Gore tex - mamaly ireo fanontaniana
Mety amin'ny bisikileta ve ny Goretex?
Gore-TexMaivana sy maivamaivana indrindra, nefa tsy manome fiarovana mitovy amin'ny toetr'andro.Tsara indrindraho an'ny hetsika aerobika toy ny mihazakazaka sybisikileta.Gore-TexPro ny lamba mandroso indrindra, manome breathability lehibe, mateza ary fiarovana amin'ny singa, fa lafo be.
Mandeha bisikileta amin'ny bisikileta Ny ankamaroantsika bisikileta dia tsy afaka mieritreritra ny hitondra bisikileta ho anao raha tsy misy azy ireo. Mpitaingina bisikileta vaovao any ivelany ianao mety tsy nahita ny tontolon'ny pataloha lycra sy bib ary tiako holazaina fa fohy sy mahatsiravina izy ireo, fohy pataloha lycra tery ny fananana faritra midadasika be ao anatiny dia hafahafa fa ny lasely dia iray amin'ireo teboka telo ifandraisana. ny bisikileta, noho izany fantatray fa zava-dehibe ny mahazo aina etsy ambany, ary rehefa mitaingina bisikileta misy ratra mankarary ianao dia tsy mahafinaritra velively. Amin'ity lahatsoratra ity dia horesahiko daholo ny momba ny fidirana an-tsekoly sy ny fitaovan'ny zaza bisikileta ary horesahiko raha mendrika ny hampiasa vola ao amin'ny Somoso's Goso.
Andao hanomboka amin'ny kilasy tantara kely ary vao haingana aho no nanao lahatsoratra momba ny fanavaozana 10 akanjo ambony indrindra amin'ny bisikileta. Aorian'ity lahatsoratra ity, maninona raha jerena fa tsy nisy talohan'ireo taona 1930 akory ny pataloha bisikileta fa ny mpitaingina dia satonwool fohy amin'ny lasely hoditra? . tsy dia tsara loatra izany eo am-piandohan'ny taona 40 nisy fanatsarana kely nisy chamois hoditra izao dia mbola nanao ianao dia mila crème hanalefaka ny hoditra, fa ny fanatsarana kely dia heveriko ho tsara kokoa noho ny tsy misy an'io dia tsy tamin'ny taona 1980 fa ny hoditry ny seza maoderina hitantsika ankehitriny dia lasa foto-tsoratry ny mpanamboatra akanjo ary ankehitriny dia simba amin'ny safidy isika, be dia be ny karazana bisikileta bisikileta azo isafidianana noho ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra hisafidianana mividy. bibikely fohy ho an'ny fampiononana Tsy fantatro ny olona maro izay nanao lasely tsy nanana baoty fohy ary nieritreritra, oh eny, tena ahazoana aina izany, tsy izany ary raha tianao ny hipetraka eo amin'ny lasely dia tsy dia mahazo aina loatra ianao, aza manahy, ianao dia Tsy irery.
Ny lamba firakotra ao anaty kilaoty fohy dia namboarina mba hampahazo aina kokoa ny mitaingina anao sy hanomezana vola anao any amin'ny faritra mety hanomezana cushioning ary ny lycrato dia manakana ny fiharatana rehetra. Ny pataloha bisikileta tsara dia voahodidina amin'ny taolam-patanao sy eo ambanin'ny valahanao ary avy eo mizara ny tsindry ataon'ny faritra mora tohina hatramin'ny hahavony ka hatramin'ny tongotra. Teknôlôjia ara-teknolojia mampitony anao sy mampionona anao ny patetika ara-toekarena dia mifoka tohotra eo amin'ny seza misy anao Ny pataloha bisikileta vita amin'ny taolana dia misy endrika sy habe samihafa, endrika sy habe ary hateviny hafa. tsaoka siklisitra sy antsipiriany betsaka no miditra ao anatin'ireny kalisaona fohy ao amin'ity pataloha fohy Castelli ity.
Tena hitako misy sosona telo eo, raha mijery azy fotsiny aho dia manana an'io sosona ambony io izay mifandray amin'ny hoditrao ankolaka ianao, izay fitaovana tsara sy malefaka ary ao anatiny dia manana ny tena fandefasana azy ianao ary afaka mahatsapa izany ny hateviny hafa dia somary matevina amin'ny toerana samihafa amin'ny taolana hipetrahanao ary avy eo somary manify eo ivelany ary avy eo manana ny sosona fahatelo ianao, izay mifandray mivantana amin'ny lasely, mendrika handany vola bebe kokoa rehefa tonga mandeha amin'ny bisikileta mandeha bisikilety satria mampahazo aina kokoa ny mitaingina sy maharitra maharitra, mpivady fohy kokoa no tsy dia mikaroka firy ary tsy dia mivoatra ary raha vao nanomboka nandeha bisikileta aho dia nividy mpivady bisikileta mora vidy ary tadidiko ilay seza dia manify kely ary tsy dia nahazo aina firy ary avy eo nametraka pataloha bisikileta tena tsara nanambola ary azoko antoka fa mahatsapa ny tsy fitovizany fa misy padding eo amin'ny faritra mety amin'ny pataloha fohy izay mitazona ny rehetra fohy eo amin'ny toerany raha tsy manana mpihazona tsara ianao na raha reraka ny fihinanao, ny azon'izy ireo atao dia ny hitanao fa mihetsiketsika mihetsiketsika ny tongotrao ny pataloha ary lasa pataloha mafana izy ireo ary afaka mifintina ny fitaovana ary miteraka fikorontanana tsy mahazo aina. , koa mitadiava fitehirizana tsara foana amin'ny pataloha bisikileta, nifampiresaka tamin'i castelli koa aho, izay manamboatra ny fitaovan'ny bisikiletanay eto amin'ny gcn sy ny fomba fampivoaranao ny kilaoty bibinao izao dia mahazo hevitra betsaka avy amin'ireo bisikileta mitafy ny fitaovana isan'andro ianao tsia tsy misy mpitaingina bisikileta matihanina hajaina ankehitriny, izany dia tena matihanina ary izany no zavatra tsy noeritreretiko, mampihena ny maro an'isa ianao. Ny seza fipetrahana dia mety kokoa amin'ny lasely maoderina, mba hahitanao lasely sy seza hipetrapetrahana izay miasa ry zareo mandehana mandeha miaraka, fa avy eo afaka manandrana seza hafa miaraka amina lasely hafa ianao ary mety tsy mandeha tsara izany ka zavatra iray hafa tokony hodinihina rehefa mividy moto bisikileta dia voalaza ihany koa fa tsy manana zaitra na zaitra eo amin'ny sosona ambony amin'ny pataloha fohy izy ireo , izay tena zava-dehibe satria raha nanao izany izy ireo dia mety hiteraka fahasosorana sy fikororohana amin'ny hoditra, izay tsy dia hahazo aina loatra. Misy ihany koa ny vanim-potoana hadisoana amin'ny famolavolana ireo shorts ary i Comfortcastelli dia handany fotoana be dia be ao anaty tionelin'ny rivotra dia nivoatra tao amin'ny kalesin'izy ireo mba hahatonga azy ireo ho aerodynamic araka izay tratra. Nanontany koa aho ny amin'ny moron'ny lehilahy sy ny vehivavy ary ny fahitan'izy ireo ny fahasamihafana eo amin'ny endrika sy ny fitoviana, ary nolazain'izy ireo fa ny habe dia zava-dehibe fa tsy ny fanamaivanana ny lehilahy fotsiny mba hifanaraka amin'ny vehivavy, fa ny hahazoana antoka fa misy ny foibe samihafa hahazoana antoka fa misy mety tsara ho an'ny vehivavy sy pad ho an'ny vehivavy manokana handraisana ny vehivavy anatomia vehivavy izay nanao hazakazaka am-bisikileta tamin'ny taona 1940 hatramin'ny 1980 dia nanao fitaovam-bisikileta mitovy tanteraka satria ny bisikileta ho an'ny vehivavy dia tsy anisan'ny Lalao Olaimpika hatramin'ny 1984, ary tamin'ny tapaky ny taona 90, kitapo bisikileta natokana ho an'ny vehivavy dia nanjary nisy habe samihafa, fanapahana samihafa ary, tena zava-dehibe, famolavolana seza hafa.
Misy karazana kilaoty fohy voafaritra manokana ho an'ny vehivavy ary maro ny kilaoty fohy manamora kokoa ny fialan-tsasatry ny vehivavy amin'ny natiora Put rehefa tsy eo amin'ny bisikiletanao ianao ary mila manao zavatra maromaro Mety hanala akanjo aleha ianao ny efitrano fidiovana dia tsy hanana bibikely fohy ny vehivavy tahaka an'ity ary ny sasany tsy Thexiaomi dia mirona amin'ny fahasamihafana kely amin'ny shorts fohy ho an'ny vehivavy, mety mety tsara aminao io, na ny vehivavy sasany tia sy mahita short fohy an'ny lehilahy koa, Andao hojerentsika ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny short shorts sy ny strappy shorts izay mihoatra ny soroka ary mitazona ny moron-dranomasina amin'ny toerany sy ivelan'ny bisikileta. Izy io koa dia tsy manana fehin-kibo lasitike, izay midika fa misy ny mety tsy fahazoana aina Aza dia lavitra kokoa ny dia lavitra. Ireo tadiny dia somary mora vidy kokoa satria mora kokoa ny tapaka satria tsy mila manala ny sosonao rehetra ianao, nefa atahorana ho lavo na hiala mihetsika ny pataloha fohy mety hiteraka tsy fahazoana aina sy hikitrihana kely ary Miteraka tsy fahazoana aina kely, toy ny zavatra maro amin'ny bisikileta fohy fa tsy mora. Afaka miovaova izy ireo hatramin'ny 25 pounds ka hatramin'ny 250 pounds. Asaivo eto ny valiny ary ny telo isan-jaton'ny tenanao nilaza fa tsy hividy azy ireo mihitsy, enina isan-jato no nilaza fa handany zero hatramin'ny 25 Ny kilao 23 dia milaza 25 ka hatramin'ny 50 pounds 41 inona ny ankamaroan'ireo nilaza fa handany 50 ka hatramin'ny 100 pounds ianao ary ny 27 kosa dia nilaza fa handany 100 pounds na mihoatra amin'ny bisikileta bisikileta, na amateur na bisikileta matihanina ianao, fohy fohy no lakilen'ny fiainana sambatra amin'ny fanantenana amin'ny lasely ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hahafantatra bebe kokoa momba ny bisikileta bisikileta bisikileta ary zavatra iray hafa alohan'ny handehananay, heveriko fa tonga ny fotoana hanaovana paulin ny fampiharana gcn mankany amin'ny fampiharana gcn ary mahazo voteoh sy ity dia izao no farany izay ankehitriny fa tsy mila manao atin'akanjo atin'akanjo ambanin'ny bisikileta bisikileta fotsiny ianao mba hampahafantarana anao, okay, veloma
Mendrika ve ny palitao Gore-Tex?
Ny valiny farany dia izayny-Texdia tanterakamanan-danjaizany amin'ny fitazonana anao ho maina, ho mpilalao mahay indrindra amin'izany fitsapana izany. Tsy io no fitaovana faran'izay miaina, na izany aza, amin'ny fananan'i Scott izay manana teti-bola izany voninahitra izany. Ny tsara indrindra rehetra dia Dainese. Aza manantena fofonaina be loatra.
Raha heverinao fa maty ny palitao Gore-Tex anao dia diso tanteraka ianao. Jereo ity, jereo ity! Nanatona ahy tokoa i Gore-Tex mba hanao lahatsoratra momba ny fikolokoloana ny palitao Gore-Tex. Ankehitriny, fantatro izay mety ho eritreretinao, tsy fantatro fa tokony hikarakara ny palitaoko Gore-Tex aho.
Iza no miahy palitao miampy 300 $? Tokony ho tsara foana izany, fa hay tsy izany. Nampitandrina ahy momba ny Gore-Tex ianao. Whoa, tsia! Andraso! (misento) Marina ny anao, ary izany no hianarantsika anio.
Tsara, andao handeha, tsara. (Mozika faly) Ity no seho ataoko, andriamanitro. Fa maninona ry zalahy a! (mihomehy) Ry zalahy, efa nilaza ve aho ry olona? Miala tsiny fa avy any Virginia aho.
Inona no atao hoe Gore-Tex? Ka ny Gore-Tex dia fonosana na lamba tsy mahazaka rivotra, izay malemy matetika amin'ny fitaovana hafa izay DWR na mandroaka rano maharitra, ka amin'ny ankapobeny dia manana zavatra izay mitazona anao ho maina amin'ny orana ianao, nefa koa hatsembohana ary avelao hanafana anao mahatsapa tsara. Mba hamaritana ny fahalalako sy hahazoana antoka fa manana ny fahalalako feno aho dia nanapa-kevitra ny hiresaka amin'ny olona avy any Gore-Tex aho. Salama Christy, faly mihaona aminao amin'ny farany .- Mahafinaritra ny mihaona aminao, Miranda .- Noho izany, amin'ny teninao hoe What is Gore-Tex? - Gore-Tex dia polymer polytetrafluoroethylene nanitatra - Polytetrafluoroethylene nanitatra. - Fitaovana iray, tena raisinay izy ireo ary hanitatra azy io mba hamoronana pores, ary mamokatra vokatra izay sady tsy tantera-drano no afaka miaina, izany no endrik'ilay membrane Gore-Tex ary avy eo nalainay ilay fonontselan-keloka fotsy ary napetakay napetrany teo amboniny sosona hafa amin'ity tranga ity.- Tsara be izany.- Ary miasa izy io noho ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana eo amin'ny vatanao sy ny any ivelany ary izany no mahatonga azy ho afaka miaina.- Matetika izahay dia mampatsiahy ny mpanjifa hanasa palitao, saingy hitako fa izay tsy dia fantatro loatra ny antony - ny lamba tsy misy rano rehetra dia raisina ho mpanala rano, eny, rehefa mandeha ny fotoana dia tsy mihodina rano intsony ity lamba ity.
Amporisihinay ny fanasana, amin'ny fampiasana detergent fanasan-dranon-dronono ary avy eo apetraka ao anaty vinainganana mafana mandritra ny 20, 30 minitra. Ity hafanan'ny fanamainana ity dia mandray ny simika, ny fitsaboana ny rano, ary mamindra izany amin'ny kofehy mba hamelomana azy indray, ny hafanana ihany. Ka manasa amin'ny detergent fotsiny? Ny zava-drehetra - tanteraka.
Sasao amin'ny detergent io ary tsy mila averinao miverina, misy ny fitsaboana fanafody famonoana rano eny amin'ny tsenambarotra, manomboka amin'ny hafanan'ny fanamainana aloha aho.- Izany no ahazoana antoka ny palitaoko Gore-Tex ataovy maina aho. Fa rehefa lany ny DWR dia tsapako Inona no tena mitranga? - Ny fanosorana ny lamba dia mety ho zavatra maro samy hafa, mety ho fanosotra, mety ho fandotoana setroka, sunscreen, spray bug, ary hatsembohana fotsiny, ny menakao eny an-tananao.
Ka raha mahatsiaro mando izy dia matetika fa ny DWR dia nijanona tsy niasa intsony. Mamporisika anao aho handray ny palitao vaovao ary hiezaka ny hanafainganana ny fihenan'ny famoahana rano. Fotoana. (Hira adala) - Tena tiako ny fizaranao ny fahalalanao amiko sy amin'ny olona rehetra mijery - Misaotra anao Miranda, faly mihaona aminao, ka rehefa avy niresaka tamin'i Christy aho dia fantatro izao fa tokony hosasana ny palitao Gore-Tex matetika kokoa, fa tsy mila detergent manokana aho, ary fantatro koa fa azoko atao ao anaty fanamainana izany, izany no lafiny manandanja indrindra, ka nomen'i Christy ahy io fanamby io hanandrana, raha ny marina, saika haingana , saika ny fahasimban'ny DWR.
Ka, eny, hataoko ho an'ny siansa izany. (mihomehy mahatsiravina) Mahatsiaro ho adala aho izao, andao hanao izany. Manana palitao aho ary izao dia hosimbako, miala tsiny. (mozika adaladala faly) sunscreen, spray spray. (mandeha ny mozika adaladala) Mampahatsiahy ahy izany fotoana rehetra izany ny reniko nanontany ahy izay nataoko tany am-piasana androany.
Toy izany aho, ry neny, nanosotra vato tamin'ny palitao aho, nanakodia maloto ary nanopy ny tenako tamin'ny takelaka fanaovan-masoandro. Inona no nataonao ry mama (mitohy ny mozika adaladala mahafaly) (kiakiaka tsy fantatra) Andriamanitra ô, eh. Fa maninona ry namana, tafaverina izahay. (mihomehy) Miala tsiny, Gore-Tex dia nanantona ahy hanasongadina sy hanambany ny DWR amin'ny palitao Gore-Tex haingana sy mahery setra araka izay tratra, ary nijery ahy nanao an'ity palitao ity ianao teo amin'ny havoana iray, nokosehiko tamin'ny loto, Nofafazako azy tamin'ny lotion suntan, spray spray, karazan-javatra rehetra izay hitranga amin'ny palitao rehefa mandeha ny fotoana, ary avy eo dia nilaza tamin'ny tenako aho fa afaka manasa sy manama azy ireo ary amin'ny ankapobeny dia azoko atao fotsiny ny manondraka ilay palitao Gore-Tex malemy. tavoahangy ary jereo ny rano mamono ny tanako na ny palitaoko, fa tsy mahafinaritra izany ka
Nataoko izany! (mozika faly) (resaka tsy mazava) Nanamboatra làlana misakana aho, mety manontany tena ianao hoe maninona, ny tanjoko dia ny hitantana ny palitaoko shabby hamakivaky ity làlana misakana ity, manasa sy manama azy, avy eo mihazakazaka azy indray, hijerena raha ilay palitao manao tsara kokoa. Andao hamafana ireo sakana. (mozika maneno) tohatra orana! Atsaharo amin'ny rivotra sy ny orana ny lainao! Mametraka orana manidina eo ambony lay ao anaty oram-be. 30 segondra amin'ny Pacific Northwest Log Scramble, ary farano amin'ny hamandoana.
bandy mampihena lanja chris
Okay, cool, andao hanao izany. Kira, ndao alao! - 10, sivy, valo, fito, enina, dimy, efatra - - Andraso, andraso - Telo, roa, iray - Okay, andao handeha. (Lakolosy maneno) (mozika mavitrika) Oh tsia, o tsia, oh tohatra.
Tsy tantera-drano ny tavako. Andriamanitro okay oh, lehilahy Ohatry ny mandeha ambony rihana ao anaty orana io. Eny ary, manaraka! (Mitohy ny mozika manahirana) Eny, whoa, tsia, andraso! Tsara izany, fiadiana amin'ny vatana, um! Izany no antony ampiasanao ny toro lalana ry havana.
Raha sendra tafatsofin'ny tafio-drivotra ianao ka milatsaka tranolay dia fantatrao izany fahatsapana izany. O, ry sakaiza, ry neny, o miadana, Bessy. ♪ (mitohy ny mozika mavitrika) O ry andriamanitro mangatsiaka be ny tanako, vao manomboka izahay, vao manomboka! Eny ary, andao ary! Oh, mangatsiaka izany, ah, mangatsiaka izany. (Mihirà tsy mazava) Oh, mangatsiaka be ny lamosiko, o tsia, oh tsara toa izany, mety izany, andriamanitro, jereo ny tananao, Andriamanitra ô, notohako ilay diso (bip).
Miala tsiny, miala tsiny amin'ny fiteniko. Oh, izany no ratsy indrindra. Zahao ity, zahao ity! Eny ary, mandeha ny fotoana dia vita isika! (Mitohy ny mozika manahirana) Mihazakazaha! Ie, tsy maninona. (mimenomenona) Tian'i Seattle ny hazo.
Ralehilahy, um. (mimonomonona) Oh, hevitra ratsy io, okay. (Mavesatra ny pataloha) (mihomehy) Tafahitsoka aho.
Eny, tsara, tsara. Amin'ny bisikiletako! - Tongotra, pedal, pedal! - Handeha aho, tsara, farany! Reraka daholo ny lohako, inona ilay (bipy). Andriamanitra ô, mahatalanjona ity.
Miala tsiny Gore-Tex, tsy misy (bip) ny fomba hiverenan'ity palitao ity. Mangatsiaka aho, lena, mando tokoa ny vatako. Ity dia tranga iray izay tokony hiala amin'ny palitao orana fotsiny aho. (Timer hums) (miaina mafy) - Eny, andao hiresaka momba izany.- Ity iray ity? - Eny - Ka ity tokoa.
Toy izao ny endriny rehefa mandingana sakana amin'ny orana ianao ao anaty palitao Gore-Tex simba. Lena mando aho. Tsara fa lena mando.
Tsy dia fantatro raha lena ao anaty aho, fa tsemboka aho, mafana aho, mahatsiaro tena tsy mahazo aina aho. Avelao aho hisintona haingana ny fofoko. Ka raha tena fitsangatsangana an-dàlam-pahazavana ity andro ity dia tena ho tsapako fa namela ahy fotsiny ity palitao ity.
Raha ny marina dia tsapako fa tamin'ity fotoana ity dia tsara kokoa ny tsy manao an'io zavatra io akory satria mipetraka eo amin'ny hoditro io. Ka izao ny dingana manaraka dia manasa sy maina izany, ary avy eo velona indray, ary miverina amin'ny palitao ol 'Gore-Tex tsara. Andao hatao! Hitanareo ny nanesorako ny DWR.
Nihosin-dronono tanteraka izy io, tena tsy nahazo aina aho, ary tonga izao ny fotoana hanasana an'io sy hamafana ary antenaina hamerina azy io indray. Manana fanasana ara-teknika eto aho, fanasana teknika fotsiny ho an'ny palitaoko, fa azonao atao ihany koa ny mampiasa detergent ranoka mahazatra. Andao hosasana. (mozika taloha) Araho ny torolàlana amin'ny palitaoo. (Mitohy ny mozika taloha) Ka izay nataoko fotsiny dia ny fametrahana ny palitaoko ao anaty milina fanasan-damba, amin'ny tsingerin'ny fanasan-damba mahazatra, miaraka amin'ny detergent misy rano, ary tokony ho mora toa izany, diovina avy eo ary avy eo ao amin'ny fanamainana, ary dia izay.
Andraso fotsiny. (Mandeha ny mozika taloha) Mety ho tokony nanasa an'io lobaka io koa ianao. (Hums milina fanasan-damba) Voasana ny palitao.
Tonga izao ny fotoana hanamainana azy. Zava-dehibe izany, aza adino. (Mitohy ny mozika taloha) (Mihoby ny mpijery) (Humainer) Eny, efa nosasana, maina ny palitao tonta ary tonga ny fotoana hametrahana azy amin'ny fitsapana ary ho hitantsika ny vokany amin'ny làlana misakana rahampitso! (Miloloha palitao) Ary miverina izahay, andro faharoa, palitao maina, fotoana hanatanterahana ny làlana misakana indray! (Ny volom-potoan'ny timer) - Mandehana! (Mozika manahirana) Tsara daholo ireo namako taloha miakatra amin'ny tohatra.
Oh, tsy ratsy izany. Raha ny marina dia andro mafana be iny ka mahatsapa tena tsara. Tsy halako izany izao.
Ianao 'Mahavita zavatra tsara ianao, Miguel, tohizo. Omaly, taorian'ny tohatra roa teo amin'ny sidina dia nando daholo aho, saingy izao dia hitanao fa maina tanteraka aho. Tena ho lena ny patalohako, fa tsy Gore-Tex izany.
Okay, zavatra iray hafa. O, reraka aho nanomboka omaly. Okay, tsy maninona, okay.
Andriamanitra ô, okay, okay. Eny ary, izany no antony nametrahanareo ny lainareo. Izaho dia manangana ity tranolay ity eto amin'ny andro feno orana sy be rivotra.
Mazava ho azy fa diso tanteraka. Ny sakana faharoa ankafiziko omaly. Manaparitaka rano ve ianao? Tena sarotra raha sendra tafio-drivotra ianao rehefa tsy manana palitao ranonorana ary avy ny orana dia tena mahonena.
Fa tsara ity palitao ity. Tena mahatsapa tena tsara, mamelombelona tokoa. Mbola mahatsiaro maina izy io fa io ihany no vato misakana faharoa, mahavita be ianao, misaotra anao tonga teto, okay ary tsara izahay.
Eny ary, eto izahay. Andao hiezaka hisarika ity sidina orana ity alohan'ny manomboka ny orana. Somary tara io.
Ka raha mipetraka any Pasifika Avaratra Andrefana ianao na amin'ny toerana tena orana? , mety efa sendra toe-javatra toy izao ianao izay toy ny andro mahafinaritra, ary tampoka teo dia nirotsaka ny orana ary manandrana mametraka ny rakotra oronao eo amin'ny lainy ianao, ah, mamy, oh wow! oh, milay be izany Hitanao izany, palitao asa tsara! Androany angamba manana andro tsara kokoa noho ny omaly aho ary tsy mankahala ny fiainako. Aiza ianao, any ianao. Wow, maina tanteraka aho.
Azonao ve ny ahy, azonao ve izany? Ary dia izay, asa tsara, Gore-Tex, asa tsara, Liv. (mitohy ny mozika mahery) (grimts) Izay no nahatonga ny fihetsiko ho tsara. Ie, mitete be. (mimonomonona) Oh wow, mahafinaritra izany! Tsara Gore-Tex! Ka io no iray amin'ireo vato misakana izay, raha manao izany matetika ianao dia hamafa ny fahamainan'ny palitao anao amin'ny farany. fa mbola mandeha tsara ihany izay tsara. (mimonomonona) Tsara, tsara, farany.
Misaotra, izany no tsy tiako indrindra farany. Oh, malefaka ato izy io, ao anaty vatako rehetra. Tena tsara izany.
Jereo io palitao io, oh jereo fa mandeha izy! Oh wow, hitanao ve izany? Zahao hahitanao azy! Jereo, fantatro fa izao no fomba tokony hiasan'i Gore-Tex, saingy na izany aza, ny fahitana azy amin'ny hetsika dia tena milay. Wow, tena tsara tarehy, heveriko fa mbola hanao ilay sakantsakana ihany isika izao. Vita, oh, vita isika, okay.
Andriamanitra ô, mifona. Oky potika masina wow maina aho (mihomehy) Ralehilahy, jereo ny rano misosa fotsiny. Izany no tokony hiasan'ny Gore-Tex.
Araka ny efa hitanao dia nopotehiko tanteraka ity palitao ity ary omaly mandomando be izy ary tena tsy mahazo aina ary tena ory. Fa anio, aorian'ny fanasana sy fanamainana fohy, maina tanteraka ity palitao ity ary azoko natao ny nihazakazaka ity lalan-tsakana ity am-polony tsy nisy olana. Azoko tsara fa raha manana palitao mando ianao dia nandany vola be dia be dia ho tsapanao fa tsy nahomby ilay vokatra ary mety tsy hatoky anao intsony amin'ny Gore-Tex ianao.
Fa araky ny nasehoko azy dia mila manasa sy maina fotsiny aho avy eo vao tokony hamelomana indray ny palitao ary vonona handeha. Izao no ampahany ilazako raha tianao ity lahatsoratra ity, tsindrio ny bokotra mitovy aminy. Raha mbola tsy nisoratra anarana tamin'ny fantsonay ianao dia ho hitako any an'ala daholo ianareo. (mozika faly) (mihomehy i Miranda) Ny farany, misaotra nijery, manaova alina mahafinaritra.
Inona no palitao orana tsara indrindra amin'ny bisikileta?
Ny safidintsika nypalitao bisikileta tsara indrindra amin'ny rano
Ny Col ProPalitao orana.
dhb Lab Aeron Ultralightpalitao.
Stelvio ara-panatanjahantenapalitao bisikileta tsy tantera-drano.
Akanjo lava lava tanana Castelli Perfetto RoS.
Ririnina Santini Vega Xtremepalitao.
Rapha Pro Team Lightweight Shadowpalitao.
Rapha Pro Team Maivanapalitao.
Iza no manao palitao gore-tex tsara indrindra?
Gore-Tex dia anarana malaza eo amin'ny sehatry ny palitao tsy misy rano. Fa i Gore Wear dia nampiasa ity fonosana majika ity tamin'ny akanjo mitaingina bisikileta mba hanamboarana fitaovana azo tanterahina sy azo tsofina, Gore hanamboarana an'ity lahatsoratra ity, ary nanasa ahy ho any amin'ny foiben'izy ireo any Alemana izy ireo hahafantatra hoe inona no mampiavaka azy manokana. Ary izay tena mandeha amin'ny fampandrosoana ny sasany amin'ireo akanjo bisikileta an-tendrombohitra indrindra eto an-tany. (mozika elektronika milamina) (feo manapaka metaly) (mozika elektronika milamina) Gore-Tex dia nahazo ny anarany avy amin'ny mpanorina Wilbert Gore ary nanomboka ny fiainana rehefa niasa ho an'ny DuPont izy tamin'ny taona 1950.
Ary niara-niasa tamin'ny zavatra fantatsika amin'ny anarana hoe PTFE na polytetrafluoroethylene izy. Ary tena hitany izany. Manana fananana tena tsara izy io, saingy zavatra tsy tian'i DuPont hodinihina.
Ary ny zanany lahy Bob no nahita fa amin'ny alàlan'ny fanitarana haingana dia hanana fananana miavaka tokoa izy io. Ary maminavina inona? Marina ny azy. Ny ePTFE taty aoriana dia natokana ho an'ny besinimaro tamin'ny marika Gore-Tex, na dia mbola tsiambaratelo ambenana akaiky aza ny fanamboarana azy.
Misy pore mikraoskaopy sivy lavitrisa isaky ny santimetatra toradroa ny fitaovana, 20.000 isaky ny 20 000 kely noho ny rano indray mitete iray aza. Midika izany fa tsy afaka mamakivaky an'ity fitaovana ity fotsiny ny rano. Fa ity ny zavatra tena mahaliana.
Ny tsirairay amin'ireo mason-koditra ireo dia 700 heny noho ny molekiola etona hafanana ihany koa, izay mila mandalo amin'ny filaharana mety hitahirizana anao, saingy inona no mahatonga azy io tsara rehefa ao anaty lamba teknika toa an'io palitao tsy misy rano io avy amin'ny Gore Wear ? Raha izany, raha miverina vetivety isika ary mieritreritra palitao tsy miovaova mahazatra, fa tsy iray amin'ireo eto, dia heverinao fa fananganana roa sosona izy ireo matetika. Izy ireo dia manana sosona PU anatiny, polyurethane, izay voahosotra amin'ny karazana hoditra ivelany. Mety ho zavatra matevina be izy io, na mety akorandriaka manify mahafinaritra izay hisy karazana fitsaboana rano, karazana fanasitranana rano.
Ka afaka mitazona ny rano tsy ho ao an-damosinao izy io, fa mangotraka ao ambadika kosa ianao, ao anatiny. Izany no antony mahatonga ny fampiasana ny membre Gore-Tex toy ny membrane amin'ny akanjo Gore raha ny marina, satria mahasakana ny rano izy io, nefa manome toky ihany koa fa ahazoana miala ny hafanana sy ny etona mando. Na dia membrane Gore Wear Gore-Tex aza ny fitaovany, dia zava-dehibe tokoa ny milaza fa manao akanjo bisikileta teknika maro hafa izy ireo ary ampahany fotsiny amin'izany, Gore Wear dia manolotra iray amin'ireo vokatra vaovao ao anaty tantera-drano sy feno tanteraka. safidy safiotra, toa anao See Ludovic mitafy azy eto.
Ka tiako ho fantatra ny antony hisafidiananao palitao hybride amin'ny zavatra toa an'io, izay safidy azo tanterahina tanteraka. - 80% amin'ny fotoana hivoahako mitaingina bisikilety fotsiny ny toetrandro dia toy ny androany, ka indraindray misy orana, indraindray rivotra, indraindray mangatsiaka. Saingy tsy orana foana izay midika fa miaraka amin'ny Gore-Tex Infinium dia manana vintana isika hanana palitao tena tsara izay mijanona ho malefaka raha oharina amin'ny palitao mafy izay somary mitabataba nefa tena mamokatra.
Ary miaraka amin'ny palitao Gore-Tex Infinium vaovao dia manana ny fahafaha-manana ny fiarovana isika izay mila manana ny ampahany miaro, ary ny ampahany malefaka rehefa mila manana faritra marefo kokoa isika. Ary malefaka azonao atao, ohatra, ny manisy fiarovana ambadika, tazomy ny palitao ary mbola afaka mihetsika amin'ny bisikiletanao ianao ary mitazona io fahalemena io tokoa. Noho izany ny fifangaroan'ny Gore-Tex sy Softshell, amin'ny anarana hoe Gore-Tex Infinium.
Ho ahy, ho avy ho an'ny mpitaingina. - Ilay fotokevitra momba an'io, tena milay tokoa. Izy io dia somary mitafy kapoty, zavatra izay tena manandanja amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, fa bebe kokoa momba izany.
Andao hojerentsika ny tena fiasan'ity haitao hybrid ity. (mozika elektronika milamina) Raha vao fantatra ny foto-kevitry ny akanjo, fotoana izao hamoronana ireo fiasa ireo. Niresaka tamin'ny mpamorona vokatra ny palitao Infinium, Anita aho.
Ny lamba Tex dia lamba voatenona, ary midika izany fa mandroaka rano kokoa na tsy mahazaka rano. lamba tsy tantera-drano Gore-Tex tanteraka. Ny lamba Softshell Gore-Tex Infinium dia baoritra, ary na dia misy kofehy elastika aza dia azo zakaina ihany koa.
Noho izany ny tombony dia mitoetra amin'ny vatana iray manontolo amin'ny fit, azonao atao ny manapaka na maodely ny palitao tena manify. - Ka mainka ny fitoviana, saika matanjaka be kokoa, heveriko fa - ny fahombiazan'ny fampisehoana, toa ny jersey, angamba. Ary mbola manana fahalalahana mihetsika ihany ianao, eny.
Tsy misy ferana. Raha toa ianao ka manao ilay palitao mitovy amin'ny lamba Gore-Tex ihany, dia tsy hahazo aina izany satria tsy afaka mihetsika ao ianao. - Eny Mazava ho azy.
Hitako io, ka voalazanao fa ny zipper dia tsy zipper tsy tantera-drano, fa mazava ho azy fa ny waterproof dia zipper matevina eto? - Ny antony dia ny zipper tsy misy rano rehetra dia noho ny fitsaboana, satria zipper mahazatra sy fitsaboana manokana eo an-tampony izy io mba hahatonga ny zipper tsy ho tantera-drano. Ary io fitsaboana io dia mahatonga ny zipper ho mafy dia mafy. Saingy amin'ity fotokevitra ity dia mbola tianay izy ho palitao tena maivana sy azo itehirizana, ary raha manana zipper tsy mahazaka rano ianao dia mila tanana roa foana --- Raha mitazona mafy ilay lamba - Tena izany, ary toy izany ny Zipper mahazatra mora ampiasaina ary miaraka amina pad, miaraka amin'ny lamba tsy misy rano sy lamba famaohana tanteraka, tsy tantera-drano koa izy io. (mozika elektronika faly) - Azonao atao ve ny manazava aminay ny sasany amin'ny fetra sy olana mety hanananao amin'ny famolavolana vokatra tena tsy mandeha amin'ny endriny intsony? - Eny, tsara, ny zava-dehibe indrindra dia manify.
mety hiteraka alahelo ny lamosina
Mazava ho azy, izany no lamban'ny vokatra rehetra. Ary eo ianao no manana fameperana be indrindra. Ka amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia tena ilaina ny mahay mandanjalanja tsara eo amin'ny fanoherana ny abrasion.
Ka raha mitazona ny kitaponao ianao dia tsy hiraraka ny palitao aorian'ny fampiasana roa na telo. Ary avy eo mazava ho azy fa tsy te-hiala sasatra ianao aorian'ny 20 minitra. Noho izany dia mila mitandrina foana isika rehefa mifidy lamba.
Diniho ihany koa ny lanjan'ilay akanjo satria mety ho tianao ilay palitao miaraka aminao fa tsy ho mavesatra loatra. Hafa mihitsy izany, fifangaroana tena sarotra, ary mieritreritra aho miaraka amin'ny palitaoninay, ao anaty palitao akorandriaka C5, tena vitantsika tsara izany.- Ary inona ny etos-nao rehefa misafidy lamba toa izany ianao? Mazava ho azy fa mahita endrika sy aingam-panahy isan-karazany ianao hatraiza hatraiza.
Ahoana no ahatongavanao amin'izany? - Betsaka ny karazany, noho izany dia avy amin'ny lafim-piainana sy faritra samihafa izy io. Noho izany dia miatrika zavatra betsaka amin'ny akanjo fiasana aho. Mazava ho azy fa lasa lamaody koa aho, satria manome anao aingam-panahy be dia be koa amin'ny loko, lamba, lamba.
Ary koa ny style izay misy eny an-tsena. Ary mazava ho azy ho an'ny bisikileta an-tendrombohitra no heveriko fa mahaliana kokoa indraindray amin'ny lamaody satria tsena mifantoka amin'ny fomba kokoa io noho ny faritra hafa amin'ny fanatanjahan-tena heveriko. Rehefa mifidy loko dia tsy maintsy mailo foana fa ny lamba sasany dia tsy mandray ny loko isan-karazany.
Raha te handoko alokaloka maivana ianao dia tokony ho fantatrao fa tsy mety amin'izany ny polyamide. Saingy tena mahaliana fa ny loko mihitsy dia manana tantara manokana. Ohatra, ny antony nisafidianana manga manga ho an'ny Marinita dia ny loko manga voajanahary no mateza indrindra amin'izany ary nampiasaina satria tratry ny masoandro, toy ny rehefa mivoaka eny amin'ny ranomasina ianao, dia tratry ny masoandro ianao ary rano sira.
Ary ny loko manga, ny loko vita amin'ny loko manga voajanahary, no mateza indrindra amin'ny loko rehetra, izany no antony an-dranomasina Ny manga dia navy izao - noho izany dia manana hery anaty lehibe any ivelany. (mozika elektronika milamina) - Nomarihinay ireo prototypes voalohany, matetika izahay manome izany ho an'ny mpanjifa mba hitsapana mandra-piaro azy tanteraka. Na indraindray andramantsika fotsiny izy io mba hahazoana fahatsapana voalohany ary avy eo dia fantatrao avy hatrany fa hahavita ilay asa izy na tsia.
Fa eny, avy eo ianao dia afaka mahita tsikelikely amin'ilay prototype ny fomba hanatonantsika ilay akanjo vita ary avy eo hihaona amin'ny vokatra irina na tsia. Ary izany rehetra izany dia mitranga ivelan'ny fenitra ary avy eo mazava ho azy avy any amin'ny loha anatiny. Hitanay izao ny akanjo izay afaka mampiditra azy amin'ny tsipika ara-barotra antsika, avy eo dia hoy isika, eny, manana dingana mahazatra isika izao.
Midika izany, toa an'i Gore, manana fitsipika antsoina hoe azo ampiasaina isika, noho izany dia manome toky izahay fa hanao ilay asa tadiavinay ilay akanjo. Ary raha tsy izany dia esorintsika tsy ho eo amin'ny tsipika na avoakanay azy fotsiny indray. Fivoarana ary miasa bebe kokoa mandrapahafatiny tena izy.- Taorian'ny fandraisana andraikitra nandritra ny fanandramana natao tany an-tsaha dia nohodiovina ireo andiana prototypes manaraka ary hitohy mandra-pahatongan'ny vokatra tonga lafatra.
Nojereko ny anjara asan'i Maria amin'ity dingana farany amin'ny fampandrosoana ny efitrano fanovana ity, koa napetrako eo ambonin'ilay maodely izany. Manandrana mamintina ireo protokolan'ny fanolorana indray aho ary avy eo manamarina isa-teboka mba tsy hanadinoako na inona na inona, izay raha ny tena izy dia tsotra ao anatin'ny fizotrany, manana ny zava-drehetra ianao, ary midika izany fa miditra anaty trims isika, mamita ary avy eo tonga ny mety, angamba iray amin'ireo sakana lehibe indrindra amin'ny fizotrany rehetra. Norefesiko ny santionany teo aloha ary avy eo aorian'ny fanamoriana, toy ny amin'ity tranga ity dia horefesiko indray.
Avy eo aho dia afaka manamarika izay fahasamihafana misy eo amin'ny fandrefesana ananako ao amin'ny rafitra sy izay ho avy eo. Avy eo dia mila mitandrina be foana aho vao mahatakatra raha mbola eo ny proportions. Raha tsy manova ny endrika mahazatra antsika ho an'ny lehilahy aho ary avy eo ho an'ny fomba tena manokana ho an'ny fanatanjahantena toy ny bisikileta an-dalambe.
Ary avy eo, hilazana amin'ny ozinina amin'ny fomba tena tsotra, sary mazava be, mazava ho azy. Ary tena variana amin'ny kalitao avo lenta amin'ny fomba fijery rehetra aho. Ataoko aloha hatrany, na ny lafiny roa na ny eo aoriana. - Izany ve no lohahevitra iray amin'ny akanjo? - Eny, maodely iray.
Ary raha mila miresaka teboka iray aho, ohatra momba ny halavany, dia maka sary miaraka amina maodely amin'ny bisikileta aho. Raha tsy ilaina dia mijoroa foana, ka --- Eny, mba hahitanao azy raha ilaina - Eny, marina. Ary avy eo, koa satria te hahita kentrona ianao rehefa mijoro indray mandeha, rehefa miala amin'ny bisikileta, na bisikileta, fantatrao.
Tsy maintsy mijery maranitra be izy amin'ny toe-javatra rehetra. Ianao sy ireo teknisianina ao amin'ny ozinina dia hiteny amin'ny fiteny iray ary izany no fomba mora indrindra hahatongavana any amin'ny fomba tena tsara hoy aho .- Ie, toa ampahany tsy mampino amin'ny fizotrany izany, ary tena mahaliana ny maheno ny fomba tsy ' tsy very amin'ny fandikan-teny rehefa manao zavatra toy izany ianao, hatrany amin'ny takelaka manokana amin'ny akanjo.
Heveriko fa tsara ary azo antoka fa misy teknolojia bebe kokoa ao amin'ny Gore Wear noho ny noeritreretiko. (mozika elektronika milamina) Efa an-taona maro izao no nampiasako akanjo bisikileta Gore. Fantatro fa teknolojia izy io, saingy tsy tsapako hoe firy ny teknolojia ao.
Zavatra manaitra. Izao dia hitanao ny habetsaky ny fampiroboroboana vokatra. Andraso mandra-pahitanao ny pejy fitsapana ny zavatra. (mozika elektro milamina) Araka ny azonao an-tsaina, ny orinasa toa ny Gore Wear dia nandinika tamim-pitandremana tokoa.
Ny safidiny eto dia saika ny zava-misy rehetra momba ny lamba, toa an'io, izay mampatsiahy ahy milina espresso kely. Mila servisy lamba izy, manidy azy ary manosika rano hametaka azy hanao tahaka ny ahoana amin'ny tontolo iray, angamba mandohalika na zavatra hafa. Tsy afaka mamakivaky an'ity akora ity ny rano.
Ary amin'ny milina hafa toa ity tester ketrona ity ihany eto, izay mizaha ny lamination ny lamba anananao anatiny sy ivelany, ary mizaha azy io amin'ny faharetana amin'ny alàlan'ny fanahafana ny tena tontolo iainana, na dia aorian'ireo fizotrany toa ity aza dia mahazo ny zava-drehetra. Voasedra indray ny rano, voasedra amin'ny zavatra toa an'ity milina fanasana amponga lehibe ity, tena mahery setra, 500 ora. Fitsapana hafanana rivotra, fitsapana ny tontolo iainana ary fanadinana aza. Fotoana izao ahazoana hevitra fa tena matotra tokoa i Gore raha ny famokarana sy ny fanandramana ny vokatra no ananany, izy ireo dia manana an'io zo io, ery, efitrano orana, mieritreritra aho fa afaka miantso an'io ianao.
Ary mba hilazana fotsiny hoe ity no tena palitao tsy tantera-drano, tsy ity no palitao hybrid izay ijoroako eto. Ary mety tsy te-hijoro eto aho manao an'ity satria toa tsy maintsy ato mandritra ny antsasak'adiny aho, protokol mahazatra fotsiny hanaovana andrana amin'ny toe-javatra toy izany. Ary izany dia mitovy amin'ny orana mitohy adiny valo, tondra-drano feno fanararaotana, ary tonga ny fotoana hitsapana ny vokatra iray manontolo, rehefa vita izany, ary hitsapana ireo fiasa rehetra ao aminy.
Saingy mipetaka amin'ny rindrina fotsiny izy ary mikendry ahy. Amin'ny ankapobeny, tsy toerana tena tsara izy io. Mampatsiahy ahy kely any an-trano rehefa manao ny marina aho. (Rano mandriaka) Ka io dia fantatra amin'ny hoe tranom-baratra, ary ny hany hitanao eto dia ireo perila-drano amin'ny faran'ny lamba eto.
Mahafinaritra tokoa. Raha ny marina, ny ampiasain'izy ireo eto dia ny fitsapana ny toetran'ny rivotra, ary izany dia zavatra ilainao amin'ny palitao tsy misy rano na karazana palitao rivotra toy ity palitao hybrid vaovao vao avy nodinihintsika ity. Manana fakan-tsary mafana eto ianao ary afaka mahita ny ataon'ny hafanan'ny vatanao mifandraika amin'izany.
Tsara be, fa mihamangatsiaka be izao ny tarehiko ary hiala eto isika. Araka izay azonao atao, ny Gore Wear dia mihevitra ny zava-dehibe tokoa raha ny momba ny fampandrosoana sy ny fanandramana ny vokatra, na eto amin'ny laboratoarany any Alemana na any amin'ny saha izay anaovany ny p. Rototypes dia nosedraina tsara isaky ny dingana fampandrosoana.
fampiofanana AB ho an'ny vao manomboka
Heveriko fa izany no lakilen'ny vokatra toa an'io palitao tsy misy rano sy fofonaina io miaraka amin'ny fonosana malaza Gore-Tex. Ary izany no antony ahafahanao manome toky fa ho maina izy io. Saingy tsy maintsy lazaiko, ireo zavatra tena nahasarika ny masoko, ny fiheverana ny antsipirihany ananan'izy ireo amin'ny lamba teknikan'izy ireo rehetra.
Ireo zavatra madinidinika toy ny cuffs elastika amin'ny sisin'ny valahana mifanohitra amin'ny lafiny iray manontolo mba tsy hikorontana ny lamba. Ary ny zavatra toa an'ity palitao Infinium ity izay mety ho very amin'ny fandikan-teny raha vao jerena, saingy misy dikany, fahatsapana tonga lafatra fotsiny, ho an'ireo mpitondra bisikileta an-tendrombohitra manana sorony sy sandry ambony tsy matevina ary mitazona io vatana tsy misy rivotra io, fa maivana kokoa, fitaovana ahazoana aina kokoa sy mihinjitra kokoa. Mpisava lalana amin'ny fomba lamba samy hafa tokoa izy ireo raha ny momba ny fitaovana tsara indrindra hivoahana sy maloto amin'ny tontolo iainana momba ny gore, izay tianao horesahina amin'ity lahatsoratra ity dia ampahafantaro anay amin'ny hevitra etsy ambany amin'ity lahatsoratra ity.
Ary ho an'ny lahatsoratra iray hafa momba ny Gore Wear, kitiho eto ambany hahitako ny tenako, Blake sy Neil lasa mandomando sy miolaka eny an-tampon'ny havoana manodidina an'i Bath, ary toy ny mahazatra, aza adino ny mamela hevitra vitsivitsy ho anay amin'ireo fanehoan-kevitra etsy ambany fialan-tsasatra. Omeo anay lehibe toy ny raha tianao ny fitafiana bisikileta an-tendrombohitra ara-teknika izay hanampy anao hankafy ny bisikiletanao amin'ny singa. Tsindrio ny bokotra fisoratana anarana ary aza adino ny mikapoka ny lakolosy fampandrenesana izay midika fa eo amin'ny fitaovanao miaraka amin'ny fonosana Gore-Tex miaro microphone koa ianao dia mahazo fampandrenesana kely isaky ny mampakatra lahatsoratra vaovao izahay.
Manana an'i Gore-Tex ve ny akanjo Gore?
nymihazakazakaanaovan'ireoSYMITSIDIKA NY MITSITRA BEvokatra manomboka izao mampiditra ny vaovaony-TEXTeknolojia Shell mavitrika, izay namboarina ho an'ny rivotra miaina.nymihazakazakaanaovan'ireofandefasana amin'ny tsenan'i Etazonia.MITSIDIKA NY MITSITRA BEmiditra amin'ny tsena aziatika ny vokatra.
Tsy misy rano ve ny Gore Bike?
nyantoka hijanona tanterakatsy tantera-drano. Na dia mitohy azaAmpiasaoary ao anatin'ny toe-javatra faran'izay mafy dia tsy hisy rano handalo.
Inona avy ireo fatiantoka ateraky ny Gore-Tex?
Drawback iray an'nyny-TEXdia ny hitandrina azy io ho madio mba hitazonana azy io ary hadio araka ny tokony ho izy. Rehefa mandeha ny fotoana, rehefa miala amin'ny alàlan'ny fitaovana ny hatsembohana avy amin'ny vatanao, dia mety hiteraka fitomboan'ny surfactants (akora simika toy ny detergent) izay mampihena ny fahombiazan'ny famonoana rano.
Mandra-pahoviana no tokony haharitra ny palitao Gore-Tex?
Na mahery azany-Texmanana androm-piainany. Ho an'ireo olona mampiasa ny fitaovany isan'andro, mandritra ny androm-piainanyafakamanomboka amin'ny telonydimy taona raha ireo izay tsy mampiasa matetika intsonyafakamanakaikyny15 taona avy amin'ny akanjon'izy ireo.
Tsy tantera-drano 100% ve i Gore-Tex?
rahamahazaka rano, tsy izanytsy tantera-drano.ny-TEXakanjo diatsy tantera-drano, mifoka rivotra ary mahazaka rivotra.
Mandra-pahoviana no haharitra ny palitao Gore-Tex?
Na mahery azany-Texmanana androm-piainany. Ho an'ireo olona mampiasa ny fitaovany isan'andro, mandritra ny androm-piainanyafakamanomboka amin'ny telo ka hatramin'ny dimy taona raha ireo izay tsy mampiasa matetika intsonyafakamahazo akaiky ny 15 taona amin'ny akanjon'izy ireo.
Iza no palitao bisikileta tsara indrindra amin'ny lalana tsy misy rano?
Akanjo bisikileta mandeha anaty rano 6 manao haingon-tsoavaly vita tsara indrindra avy amin'ny fitaovana mahagaga an'i Gore-Tex Ho an'ny mitaingina ny ranonorana, ny grail masina dia palitao bisikileta tsy tantera-drano izay maivana, mahazo aina, mahazaka rano be nefa mbola miaina ihany, ary rehefa mivoaka ny masoandro, te-ho afaka mitahiry izany amin'ny tsy misy ianao.
Aiza no ahafahako mividy palitao bisikileta mihetsiketsika?
Rehefa nampahafantarina an'i Shakedry dia tsy hita afa-tsy tamin'ny tsipika fitafian'i Gore ihany izy io. Niova izany ary efa misy ny palitao Shakedry avy amin'ny marika bisikileta ambony ambony hafa izay mihabe isa. Noho izany dia afaka mahita palitao bisikileta Shakenry ianao toa an'ireo Castelli, 7Mesh ary Rapha.
Iza no palitao môtô tsara indrindra?
Ny palitao môtô Gore-Tex dia iray amin'ireo fomba mety indrindra hijanonana ho maina sy hahazo aina rehefa mitaingina bisikileta. Ny fonosana vita amin'ny rano tsy misy rano sy mifoka rivotra dia mamiratra amin'ny fitazonana ny orana nefa mamela ny hoditrao hifoka mba tsy hiankina ao anatiny.